Telefishanka CNN oo Warbixin ka Diyaariyey Saameynta Isbeddelka Cimiladu ku Yeelatay Somaliland | ToggaHerer
← Sheekh Dirir; Waxyaalaha DHAAWACA WALAATINIMADA ISLAAMKA
Wararkii ugu dambeeyay roobab Dabeylo wata oo ka da’ay guud ahaan Puntland →
Telefishanka CNN oo Warbixin ka Diyaariyey Saameynta Isbeddelka Cimiladu ku Yeelatay Somaliland
Published on December 7, 2019 by Magan
Telefishanka caanka ah ee CNN oo laga leeyahay Maraynka ayaa warbixin ka sameeyey saameynta taban ee isbeddelka cimiladu ku yeelay Jamhuuriyadda Somaliland.
Jomana Karadsheh oo ah Weiyaha arrimaha caalamiga ah ee Telefishanka CNN, ayaa booqasho ku timid Jamhuuriyadda Somaliland, waxana warbixinteeda oo Wakaaladda Wararka ee SOLNA soo xigatay ay ku sheegtay in roobab waaweyn iyo daad ay barokiciyeen kumanaan qof oo ku nool deegaanno ka tirsan Somaliland. Halka ay roobabku baa’biiyeen wax-soo-saarkii beeralleyda.
Weriyaha CNN waxay booqatay xeryo ay degan yihiin dadkii abaaraha ku baro-kacay oo ay tilmaantay in magaalooyinka yimaadeen markii saddex meeloodoow laba ay ka baxeen xoolihii ay dhaqan jireen. Warbixinta CNN waxa ay intaas ku dartay inay Somaliland tahay dal ay dhab ahaan saameeyeen isbeddelka cimilada Adduunku.
Sacdiya Muuse ayaa u sheegtay Telefishanka CNN in dawladaha reer galbeedka ee qiiqa badan hawada ku sii daayaa ay masuul ka yihiin isbeddelka cimilada isla markaana ay Somaliland soo gaadheen waxyeelladii ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunku.
Sidoo kale, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta reer Miyiga Somaliland Marwo Shugri Ismaaciil Bandare ayaa u sheegtay Telefishanka CNN in dhibaatada isbeddelka cimiladu ay taabatay Somaliland, iyadoo aanu dalku haysanin Ictiraaf caalamiya.
Telefishanka CNN waxa uu ku soo gabogabeeyey warbixintiisa in Xukuumadda JSL ay doonayso inay soo jiidato maalgashiga caalamiga ah, waxana ay ka warameen heshiiska lagu casriyeynayo dekedda Berbera ee ay wada galeen JSL iyo Shirkadda DP World.